Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. तरकारी र फलफुलबाट कोरोना सरेको रेकर्ड छैन, नष्ट नगरौँ – Janata Live
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्ने डरले पोखरा, अर्घाखाँची, डडेल्धुरालगायत केही ठाउँमा केही दिनअघि तरकारी नष्ट गर्ने काम भयो । ट्रकका ट्रक तरकारीलाई खाल्डो खनेर पुर्ने काममा जनप्रतिनिधिहरु नै सहभागी भए । नेपालबाट उत्पादिन कृषि उपज नष्ट गर्ने काम भए पनि भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफुल भने नेपालका विभिन्न बजारमा निर्वाधरुपमै खपत भइरहेकै छन् ।
अहिलेसम्म तरकारी, फलफुललगायतबाट कोरोनाको सङ्क्रमण सरेको रेकर्ड नभएकोले तरकारी तथा फलफुल खाडलमा गाड्ने काम गर्नु गलत रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । यसै विषयमा टेकमान शाक्यले जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर रवीन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्ने डरका कारण नेपालका केही ठाउँमा तरकारी तथा फलफुल जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा नष्ट गर्ने काम भयो । तरकारी र फलफुलजन्य सामग्रीबाट कोरोना सर्छ र ?
संसारमा अहिलेसम्म तरकारी, फलफुल र खानाबाट कोरोना सरेको प्रमाण छैन । तरकारीलाई सुरक्षित किसिमले हामीले घरमा ल्याउन सक्छौँ । अहिले हामीले कोरोना सर्ने डरले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुगेका तरकारी खाएका छैनौँ तर भारतबाट आएका तरकारी भने उपभोग गरिरहेका छौँ । यो कुरा बिर्सन हुँदैन कि हाम्रो गाउँमा हाम्रा किसानले फलाएका फलफुल तथा तरकारी भारतबाट आयातितभन्दा बढी पोषिलो र स्वस्थकर हुन्छ भन्ने कुरा । त्यसैले तरकारी फाल्ने, नष्ट गर्नेजस्ता प्रवृत्ति हामीले पटक्कै गर्नु हुँदैन । फलफुल र तरकारीबाट कोरोना सरेको रेकर्ड अहिलेसम्म संसारमै छैन ।
यदि सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कबाटै आएको छ भने पनि त्यो फलफुल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा हुन्छ त उसो भए ?
किनेर ल्याइएको तरकारीलाई मनतातो पानीमा डुबाएर, नुन राखेर अथवा हल्का खाने सोडा हालेर पखालियो भने यदि कोरोनाको सङ्क्रमण रहेछ भने पनि नष्ट हुन्छ । त्यसरी प्रयोग गर्यौँ भने जहाँबाट ल्याइएको तरकारी भए पनि त्यसबाट कोरोना सर्दैन ।
त्यसो भए स्थानीय प्रशासन या भनौँ जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने क्रियाकलाप गलत छ हैन ?
एकदमै गलत हो । अस्ति अर्घाखाँची जिल्लामा जुन घटना भयो, त्यसपछि हामीले व्यापकरुपमा त्यसको विरोध गर्यौँ । त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो । पछि मन्त्रालयले विज्ञप्तिसमेत निकाल्यो । त्यस्तै चितवनबाट पोखरा लगेको तरकारी पनि फाल्ने काम भयो । हामीले त्यसको पनि विरोध गर्यौँ । त्यसपछि भने अलिकति भने पनि चेतना आएको छ ।
उसो भए पालिकाकै रोहबरमा जनप्रतिनिधि सहभागी भएर यस्तो काम किन भयो होला ?
मेरो विचारमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँबाट तरकारी आउँदैछ भन्ने जानकारी आएपछि त्यसलाई नष्ट गर्ने आदेश आएको र त्यही आदेश अनुसार नष्ट गर्ने काम भएको जस्तो लाग्छ । प्रहरी, प्रशासन, पालिकालाई हामीले काउन्सिलिङ गर्न नसकेको कारण यस्तो समस्या भएको हो । यो उहाँहरुको पनि दोष होइन । किनभने उहाँहरुलाई जानकारी छैन र शङ्का छ भने त्यो शङ्कालाई निराकरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले सबै निकायलाई यो विषयमा प्रष्ट पारेर परिपत्र गर्नु जरुरी छ । हामी जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि समय समयमा सचेत गराइरहेकै छौँ । कोरोना भएको मान्छेलाई भेदभाव गर्ने,सामान फाल्नेलगायत काम गर्नु गलत छ । कोरोना भाइरस मान्छे, जनावर र रुखबिरुवाको शरीर र सेलमा मात्रै बाँच्न सक्छ । तरकारीको बाहिरी कभरमा कोरोना बाँच्न सक्दैन ।
यदि तरकारी उत्पादन गरेको ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण छ र केही सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा तरकारी ढुवानी भएको छ भने नि ?
यदि तरकारीमै कोरोना छ भने पनि कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँची पुर्याउने बेलासम्म अथवा चितवनबाट पोखरा लैजाने समयसम्ममा नष्ट भइसकेको हुन्छ । किनकि लामो दुरीमा धेरै समयसम्म रहन सक्दैन । दोस्रो कुरा लोड गर्दा, अनलोड गर्दा नै नष्ट भइसकेको हुन्छ । कारणबस २–४ वटा कोरोना भाइरस तरकारीसँगै आएको छ भने पनि त्यसबाट कोरोना सर्दैन । कोरोना भाइरस खासगरी श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो । यो एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ । अनुहारतिरै फर्केर खोक्यो भने, हाच्छ्युँ गर्यो भने अनि चर्कोसँग बोल्यो भने मात्रै कोरोना सर्ने हो ।
कोरोना सङ्क्रमितसँग मास्क प्रयोग नगरिकन छोटो समय बसेर कुराकानी गर्दासमेत यो सङ्क्रमण सर्दैन । प्रतिमिनेट झण्डै एक सय वटा भाइरस सङ्क्रमितको मुखबाट बाहिर निस्कन्छ । कोरोना भाइरस सर्नको लागि एक हजारदेखि तीन हजार वटासम्म भाइरस हुनुपर्छ । त्यो नभएसम्म भाइरस सर्ने लोड पुग्दैन भने तरकारी र फलफुलबाट सर्ने कुरा त टाढैको कुरा भइहाल्यो । यदि तरकारी फलफुल र खाने कुरामा ८–१० वटा भाइरस रहेछ भने पनि त्यसबाट सर्ने कुनै चान्स नै हुँदैन । संसारमा कतै पनि तरकारी र खानाबाट कोरोना सरेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन । सबैजना यो विषयमा ढुक्क हुन जरुरी छ ।
हामीले सङ्क्रमणको दर तीव्र रहेको भारतलगायत देशबाट आयातित सामानहरु अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ । कृषि उपजहरु पनि उत्तैबाट आइरहेको छ । यतातिरबाट चाहिँ सङ्क्रमण भित्रने सम्भावना कत्तिको रहन्छ?
तरकारी, फलफुलमा त सङ्क्रमण केही समयसम्म मात्रै रहने हो । ७२ घण्टासम्म रहने मेटल र धातुहरु पनि नेपाल आइरहेकै छन् । सङ्क्रमण धेरै समय रहन सक्ने सामग्रीबाट समेत कोरोना सरेको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । अमेरिकाको एउटा अध्ययनले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण श्वासप्रश्वासबाट मात्रै सर्ने देखाएको छ । धातु, खाना, तरकारी र फलफुलबाट सङ्क्रमण सर्नको लागि लोड नै नपुग्ने अध्ययनको दाबी छ ।
आयातित सामग्री ल्याउने मान्छेहरुमा सङ्क्रमण रहेछ भने मात्रै उनीहरुबाट अरु मानिसमा सङ्क्रमण सर्ने हो । यो विषयमा धेरै तनाव लिनुपर्दैन । पञ्जा लगाउने, मास्क लगाउने र राम्रोसँग हात धुने गरियो भने हामीले केही डर मान्नै पर्दैन । उज्यालोअनलाइनबाट